Momba anay - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Hatramin'ny 2007, Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd. dia nifantoka tamin'ny serivisy fananganana fifanarahana ho an'ny mpanjifa manerantany. Ny vahaolana iraisanay turnkey dia misy ny fizarana singa, famokarana PCB, fivoriambe PCB, fananganana boaty plastika / vy, fivondronana hamenoana ny vokatra fivoriambe. Ny kalitao dia azo antoka.
Ho fanampin'ny EMS, Fumax R&D dia afaka manampy ny mpanjifa hamorona tetikasa vaovao isan-karazany ary hamadika ny heviny ho tena vokatra. Ny serivisy R&D misy ny famolavolana vokatra vaovao, ny famolavolana tetika elektronika, ny firafitra PCB, ny endrika machanical, ny prototypes ary ny pilot ho an'ny famokarana betsaka. Mampiasa mpiasa maherin'ny 300 mahay be izahay miaraka amin'ny haben'ny orinasa mandrakotra 5000 metatra toradroa.
Ny ekipa Fumax dia manolo-tena hanolotra ny vahaolana famokarana tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika hatramin'ny andrana santionany ka hatramin'ny famokarana antonony.
Ny tanjon'i Fumax dia ny hanome ny vahaolana safidy ho an'ireo OEM izay mila mpiara-miasa amin'ny famolavolana mifantoka sy mamaly sy mpamokatra ho an'ny vokatra elektronika antonontonony.
Nahavita sy manavao tsy tapaka ny mari-pankasitrahana rehetra ao anatin'izany izahay ISO90001, CE, FCC, UL, ROHS, hiantohana ireo vokatra avo lenta.
Voalohany mpanjifa - Manome serivisy fanoloran-tena sy fanavaozana vita fanoloran-tena sy manatsara ny mpanjifanay; manome azy ireo tombony amin'ny fifaninanana amin'ny fahafaha-manao, ny haitao, ny fotoana an-tsena ary ny vidiny tanteraka.
Hoekena ho mpiara-miasa azo antoka izay mamolavola sy manamboatra vokatra an'izao tontolo izao ho an'ny mpanjifantsika, ary manome valisoa ireo mpiasa sy tompon-tany aminay.
Mahafa-po ny mpanjifa, Manovaova, Mahitsy, Miantsoroka andraikitra, Mpanome vahaolana, Miasa amin'ny ekipa.